चाडपर्वको बीचमा यी ४ राशिका भाग्यले चम्किनेछ, तपाईका लागि नोभेम्बरको पहिलो साता कति शुभ छ ?
गृहपृष्ठ » धर्म/संस्कृती » चाडपर्वको बीचमा यी ४ राशिका भाग्यले चम्किनेछ, तपाईका लागि नोभेम्बरको पहिलो साता कति शुभ छ ?
आजको राशिफलधर्म/संस्कृतीसाप्ताहीक राशिफल
धार्मिक व्यूरो । नोभेम्बरको पहिलो साता धनतेरस, दीपावली र भाइटीका जस्ता चाडपर्वहरूले भरिपूर्ण हुने भएको छ । ज्योतिषीहरुका अनुसार केही राशिका मानिसहरुको खर्च बढ्ने देखिन्छ ।
केही राशिका व्यक्तिका लागि आम्दानीका नयाँ स्रोतहरू देखा पर्नेछ। मिथुन, कन्या, वृश्चिक र मकर राशिका लागि पहिलो साता बढी लाभ हुने सम्भावना छ । नोभेम्बर ०१ देखि नोभेम्बर ०७ सम्मको साप्ताहिक राशिफल जानौं ।
मेष- साताको सुरुदेखि स्वास्थ्य र मानसिक स्थितिमा सुधार आउनेछ। बिस्तारै धनको आगमन जारी रहनेछ। घरायसी काम र पढाई आदिमा व्यस्तता रहनेछ । परिवारमा केही शुभ कार्य हुनेछ, उपहारको लाभ मिल्नेछ। यस साता अनावश्यक विवादबाट बच्नुहोला, बोलीमा नियन्त्रण राख्नुहोला। मंगलबार साताको उत्तम दिन रहनेछ।
वृष– साताको सुरुमा अनावश्यक तनाव आउन सक्छ । आफ्नो व्यक्तिको व्यवहार र स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ। तर, क्रमशः स्थितिमा सुधार हुँदै जानेछ । पैसा र करियर स्थिति ठीक रहनेछ। साताको अन्त्यमा यात्रा र सुखद समाचारको संकेत मिल्नेछ। यो साता बिहीबार तपाईको लागि उत्तम दिन रहनेछ।
मिथुन- साताको सुरुमा व्यस्तता धेरै हुनेछ। धन खर्च बढ्नेछ र ऋणमा समस्या हुनेछ। पारिवारिक झगडा र सरकारी समस्याबाट टाढा रहनुहोस्। साथीभाइको सहयोगले समस्या समाधान हुनेछ । साताको अन्त्यमा धनलाभ र सवारी साधनको सुख मिल्ने योग रहेको छ । यो साता शनिबार तपाईको लागि उत्तम दिन रहनेछ।
कर्कट- साताको प्रारम्भमा केही महत्त्वपूर्ण काम गर्न सकिनेछ। तर, यसपछि धेरै दौडधुप र व्यस्तता बढ्नेछ । कुनै पनि निर्णय लिन हतार नगर्नुहोस्। परिवारका ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुहोला । साताको अन्त्यमा धार्मिक स्थलको यात्रामा जान सकिनेछ। यो साता तपाईको लागि बुधबारको दिन राम्रो रहनेछ।
सिंह- साताको प्रारम्भमा रोकिएका काम पूरा हुनेछन्। धन समस्या समाधान हुनेछ। ऋणबाट मुक्ति मिल्नेछ । सम्पत्तिको काममा व्यस्तता बढ्न सक्छ। परिवारमा केही शुभ कार्य हुने सम्भावना छ । साताको अन्त्यमा खानपान र स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। यो साता शुक्रबार तपाईको लागि राम्रो दिन रहनेछ।
कन्या- साताको सुरुमा पारिवारिक तनाव बढ्न सक्छ। तैपनि परिस्थितिलाई सम्हाल्नुहुनेछ। स्वास्थ्य र मानसिक स्थितिमा क्रमिक सुधार हुनेछ। आकस्मिक धन र उपहारको लाभ मिल्नेछ । यो साता गाडी चलाउँदा र अग्निजन्य कार्य गर्दा सावधानी अपनाउनुहोला। यो साता तपाईको लागि बुधबारको दिन राम्रो रहनेछ। व्यापार वा जागिरमा पैसाको रसिद एकै ठाउँमा रोकिएको छ भने ।
तुला- साताको प्रारम्भमा अचानक आर्थिक लाभ हुनेछ। यो साता नयाँ करियरको अवसर आउन सक्छ। स्वास्थ्यमा केही उतारचढाव आउन सक्छ। आफ्नो जिम्मेवारी र महत्वपूर्ण कामलाई पटक्कै पछि नछोड्नुहोस्। साताको अन्त्यमा पारिवारिक विवादबाट बच्नुहोला । सोमबार तपाईको लागि विशेष अनुकूल दिन हुनेछ।
वृश्चिक– सातामा सबै नयाँ योजना सफल हुनेछन् । करियरमा राम्रो सफलता मिल्ने समय रहेको छ । धनको स्थितिमा सुधार आउनेछ, चिन्ता हट्नेछ। आफ्नो योजना गोप्य राख्नुहोस्। अत्याधिक आत्मविश्वासबाट बच्नुहोस्। साताको अन्त्यमा पुरस्कार सम्मान मिल्न सक्छ। यो साता तपाईको लागि आइतबार अनुकूल रहनेछ।
धनु-साताको सुरुमा लाभदायक यात्राको सम्भावना छ। व्यस्तता बढ्नेछ, तर हरेक अवस्थामा लाभ हुनेछ। कुनै वांछित पद प्राप्ति वा करियरमा सुधारको सम्भावना छ। यस समयमा स्वास्थ्य र जीवनशैलीमा ध्यान दिन आवश्यक छ। साताको अन्त्यमा धन हानि र विवादबाट बच्नुहोला। यो साता बिहीबार तपाईको लागि विशेष अनुकूल रहनेछ।
मकर- साताको सुरुमा स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। सवारी सावधानीपूर्वक चलाउनुहोस्, विवाद नगर्नुहोस्। समग्रमा यो समयमा धनको स्थिति ठीक रहनेछ। करियरमा बाधाहरू हट्नेछन्, स्थिति बलियो हुनेछ। साताको अन्त्यमा केही ठूला कामहरू हुने देखिन्छ। शनिबार यो साता विशेष अनुकूल रहनेछ।
कुम्भ- साताको सुरुवात समग्रमा मध्यम रहनेछ। काम र जिम्मेवारीको बोझले समस्या निम्त्याउनेछ। स्वास्थ्य र मानसिक स्थितिमा केही समस्या आउन सक्छ। पैसा र करियर स्थिति बलियो रहनेछ। शैक्षिक प्रतिस्पर्धा र नयाँ काममा सफलता मिल्नेछ। शनिबार तपाईको लागि विशेष अनुकूल दिन हुनेछ।
मीन – साताको शुरुमा करियरमा विशेष सफलता मिल्नेछ । लामो समयदेखि रोकिएका काम पूरा हुनेछन् । पैसा आइरहेको छ, तर यो समयमा बचत गर्न गाह्रो हुनेछ। स्वास्थ्य र मनको चलिरहेको समस्यामा सुधार आउनेछ। यो साता समयको सदुपयोग गर्नुहोस्, सबै कामहरू बन्नेछन्। सोमबार तपाईको लागि विशेष अनुकूल दिन हुनेछ।
मीन राशिको कार्यमा प्रगति, तपाईको अवस्था जान्नुहोस् : राशिफल / २०७८ मंसिर २० गते, साेमवार
१९ मंसिर को राशिफल : कुम्भ राशिका लागि राम्रो आम्दानी, जान्नुहोस् मेष देखि मीनसम्म कस्तो छ
आज यी ५ राशिमा अति लाभ, ४ राशि अति सावधान : राशिफल / १८ मंसिर, २०७८ शनिवार
यस्तो छ आजको राशिफल : ५ राशिलाई लाभ, ४ राशिका लागि सावधान / २०७८ मंसिर १६ बिहीवार
आर्थिक राशिफल : आज यी ५ राशिले प्राप्त गर्नेछन् आर्थिक लाभ
आज यी ५ राशिको आकस्मिक खर्च, ४ राशिलाई लाभ: राशिफल / २०७८ मंसिर १५ गते, बुधवार
यी ५ राशिलाई धन लाभ : कस्तो रहनेछ तपाईको आजको दिन, राशिफल/२०७८ मंसिर १३ गते, साेमवार
सावधान ! यी ५ राशिलाई व्यापारमा धोका, आर्थिक हानि: राशिफल / २०७८ मंसिर ५ गते, आइतवार